La qabsashada dhirta ee isbeddelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Isla mar ahaantaana in aadanaha, iyo sidoo kale xayawaanka, ay isku dayayaan inay iska difaacaan cawaaqib xumada ka dhalata ku noolaanshaha jawi sii kordheysa ee kulul iyo qalalan, noolaha dhirta sidoo kale waxay isku dayayaan inay la qabsadaan xaaladdan cusub.
Baaritaan lagu daabacay "Global Chamge Biology", oo ay fulisay Jaamacadda Liverpool oo kaashanaysa Jaamacadda Syracusa (oo ku taal Maraykanka), ayaa sharraxaysa. waa sidee laqabsiga dhirta ee isbedelka cimilada.
15-kii sano ee la soo dhaafay, waxay darseen jawaabaha kala duwan ee xaaladaha cimilada kala duwan ee suuragalka ah ee leh taxane dhir ah oo ka yimid dhul-beereedka ku yaal meel aad ugu dhow magaalada Ingiriiska ee Buxton, sida abaar aad u daran ama roob badan. Natiijadu waxay ahayd mid aad u xiiso badan, tan iyo markii ay ogaadeen in isbedeladan waxay badaleen DNA dhirta, wax khubaradu ugu yeedheen "samatabbixin horumarineed".
Raj Whitlock, PhD iyo borofisar cilmiga Ecology ka ah machadka Liverpool University Institute for Integrative Biology, ayaa sheegay in xaqiiqda ah in isbadalka cimilada ay sababtay isbadal ku yimid kala duwanaanta hidde-wadayaasha dhirta kaliya 15 sano ka hor. ka dhig wax la yaab leh, maadaama badanaa dhirtu waxay qaadataa waqti dheer si ay ula qabsato isbedelka cimilada. Marka, tani waxay sharxi kartaa iska caabinta dhirta la bartay markii lagu qasbay inay ku koraan xaalado gaar ah oo deegaan.
Cilmi baaristaan ​​waxaa lagu sameeyay sheybaarka Buxton ee Isbadalka Cimilada (BCCIL), oo ku taal buur ku maareeyay cimilada si tijaabo ah ilaa iyo 1993 si loo arko sida dhirtu uga falcelisay.
Iyadoo tijaabadani ay tahay mid aad u xiiso badan, isbedelka cimilada wuxuu caqabad aad u muhiim ah u horseedi doonaa inta badan dhirta, kuwaas oo maanta mar horeba isku dayaya inay la qabsadaan cimilada sii kordheysa ee isbedeleysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » La qabsashada dhirta ee isbeddelka cimilada
Jarmalka waxaa soo maray saamaynta isbedelka cimilada